अबको साहित्य तथा कला कता ? (डा. कविताराम श्रेष्ठ) - [2008-09-12]
हजारौँ वर्षको अन्तरालपछि देशमा ठूलै परिवर्तन आएको छ । विगतको राजनीतिक द्वन्द्वको परिस्थितिमा बसेर यस क्षत्रमा जे हुनुपर्थ्यो । जसरी हुनुपर्थ्यो सत्ताको डंकनको कारणले गार् हो थियो । अबको खुलेको परिवेशमा लेखनका विषयहरुले कायापलट गरिसकेको अवस्था छ । जस्तै हीजो जुन विषयलाई साम्प्रदायिक मानिन्थ्यो वा उग्रवादी वा अराजक मानिन्थ्यो आज त्यो विषय साहित्यकारहरुको लागि समावेशी वा लोकतान्त्रिक वा क्रान्तिकारी अभिष्ट बन्न पुगेको छ । यो नयाँ परिस्थितिमा बहुदा साहित्यकर्मीहरुलाई अगाडि बढ्न हीजोको त्यो मानसमा भएको कुसँस्कारलाई आफैभित्र अस्वीकारेर नयाँ विषयमा आफूलाई ढाल्नु चुनौति बनेको छ । वास्तबमा सहित्यकारहरु क्रान्तिको अग्रदूत हुनुपर्दथ्यो । तर हीजो हाम्रा बहुधा साहित्यकारहरु पूर्ववत मान्यताका भाटगिरीमै मस्त भई जनताभन्दा धेरै पछि परेका थिए । अबको परिस्थितिमा त्यो पूर्ववत साधनाले काम गर्दै छैन । त्यसैले त्यस्ता पछौटे साहित्यकारहरुलाई यात त्यसैमा ढालिन पर् यो या त लेखन धर्म नै छाड्न पर् यो । जो लेख्छु नै भन्दैछन् ती सबैलाई यसैतर्फ साधनारत हुनै पर्ने अवस्था छ । उनीहरुको लागि निक्कै गाह्रो स्थिति छ । अर्काखाले क्रान्तिकारी साहित्यकर्मीहरुमा भने परिवर्तनका आभास प्रचुर छन् । तर उनिहरुको पखेटा पनि युगौँको पिँजडामा बन्दी रहेका कारणले कुँजिएका छन् । मुक्त आकाश भेट्दा पनि र आफूमा जोश रौस र शक्ति हुँदाहुँदैपनि उन्मुक्त भएर उड्न कुँज्याइको कारणबाट अशक्त भइरहेको स्थिति छ ।
प्रगतिशील कर्मीहरुको लागि क्रान्ति कहिल्यै टुंगिदैन । कहीँ कुनै पनि जीव निर्जीव प्रघटनामा प्रगतिको लागि सीमा हुन्न । यही कुरा रंगकर्मीहरुलाई पनि लागु हुन्छ । तर दायित्वकै कुरा गर्ने हो भने रंगकर्मी वा चलचित्रकर्मीहरुसमेतको संस्कृतिकर्मीमा त्यो दायित्व बढी घनिभुत छ । साहित्य भनेको बौद्धिक समुदायमा जाने एउटा विधा हो तर चलचित्र वा रंगमंचन भनेको सबै तहका सवै उमेरका सबै िलंगका जनसमुदायमा प्रत्येक्ष जाने कुरा हुन् । साहित्यमा भएका सानातिना गल्तिहरु बौद्धिक समुदायले यसै पचाउँछन् तर रंगमंच वा चलचित्रमा भएका ससाना गल्तिले वीषकै काम गर्न सक्छ । त्यसैले यसक्षत्रका कर्मीहरुका समवेदनशीलता र दायित्वबोध नीकै गंभीर हुनुपर्छ । साहित्यकर्मी रंगकर्मी एवम चलचित्रकर्मीहरुले अहिलेको आवश्यकतालाई प्राथमितकता दिई जनतालाई सुसूचित गर्ने र अग्रगमनको बाटो निर्देश गर्नुपर्छ । यी विधाहरुमा अग्रगमनको शत्रु को मीत्र को परिवर्तित स्थिति के र अबका दिशा के बाटोहरु के र गन्तव्य के यी सबैको स्पष्ट निर्देशन हुनु जरुरी छ ।
वर्तमान परिवर्तित परिस्थितिमा िसंगो समाजलाई साहित्य कलामार्फत् कसरी अग्रगामी बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न उब्जन्छ । यो स्पष्ट छ नेपाली विश्वविद्यालयहरुले अहिलेसम्मका उत्पादन गरेका संस्कृतमूखी साहित्यकार र उनैद्वारा उत्पादित साहित्यिक अध्यापकहरुले त्यो गर्दैनन् । हज्जारौँ वर्ष पुराना जीर्ण मान्यतामूखी पाठ्यपुस्तकका यी उत्पादनबाट त्यो कदाचित
हुनेवाला छैन । सत्तामा बस्ने दलहरुलाई सन्देश यो दिन सकिन्छ कि अहिलेको परिवर्तित मूल्यअनुरुपका अग्रगामी पाठ्यपुस्तकहरुका निर्माण र त्यसै साथ नयाँ पिँढीलाई यसतर्फ अग्रसर बनाउन पर्छ । साथै नयाँ नेपालका प्रगतिशील क्रान्तिकारी कलाकर्मीहरु तथा साहित्यिकारहरुमा अरुको पनि सुन्ने धैर्यता र खुलापन हुनुपर्ने मैले देखेको छु । अबको साहित्य तथा कला शोषितूुखी मात्रै होइन शासितमुखी पनि बनेको हुनपर्छ । आजको भाषामा भन्ने हो भने शाशितहरु समेतको समावेशी साहित्य हुनुपर्छ । शोषितको साथै शासितहरुको मुक्ति पनि साहित्यको अभिष्ट रहनुपर्छ ।
छोटोमा भन्नु यही छ कि कुनैपनि प्रगतिशील संघर्षको अन्त्य कदाचित हुन्न । समाजमा प्रगतिशील संघर्ष सकारात्मक परिवर्तनको लागि एक नभइनहुने माध्यम हो । त्यसैले समाजमा संघर्ष एउटा शाश्वत परिघटना हो । त्यो थियो छ र सदा रहने छ । जब समाजमा संघर्ष सिद्धियो भनिन्छ त्यहाँ नै प्रगतिको क्रम अबरुद्ध भयो भन्ने जाने हुन्छ । हरेक समाजमा घट्ने यही हो कि हरराजनीतिकर्मीहरु आफ्नो दुनो सोझिनेसाथ थपसंघर्षप्रति निरुत्साहित हुन्छन् । अझ भन्ने नै हो भने उसको दुनो गुम्ने डरमा प्रगतिशील संघर्षलाई निरुत्साहित गर्न लाग्दछ । या त उनिहरु संघर्षशीलतालाई किनेर भाटगीरीमा परिणत गराउँन लाग्छन् या असामाजिक तत्वको रुपमा अस्वीकार गर्दै त्यसैमाथि दमन शुरु गर्दछन् । सही साहित्यकर्मी तथा कलाकर्मी कदाचित भाट रहन सक्दैन । हरेक विसंगतिविरुद्ध उनको चेत जागरुक रहेको हुन्छ । कतै उ रोकिन्न । कतै उ विक्दैन । कतै ऊ भुल्दैन । रोकिनु विकिनु वा भुल्नु उसको मृत्यु हो भन्ने उ बुझ्दछ । ऊ सदा संघर्षशील खबरदारी र विद्रोहमा जीवन्त भइरहन्छ । आकाश खस्छ भनेपनि ऊ विचलित हुन्न । ऊ भाट रहन सक्दैन । अबको खुलापनको बिमा उसैको हतमा छ । स्वतन्त्र समाज निर्माणको लागि निर्देशको जिम्मा उसैमा छ । धन्यबाद ।
नयाँ परिपेक्ष्यामा अस्वीकृत साहित्यको घोषणा
नेपाली समाजले भरखरै आएर एउटा जीर्ण अनुपयोगी व्यवस्थालाई विस्थापित गरी नयाँ सामाजिक व्यवस्थालाई स्थापना गर्ने महान कार्यमा पाइला चालेको अवस्था छ । ज-जसको यस संघर्षमा सहभागिता थियो त्य-त्यस्ले यस नवीन समाज निर्माणमा मौका पाउनुपर्छ तर निर्माणमा मौका लिनु वा पाउनु भनेको त्यसको फल बाँडेर खाने अर्थमा लिनु हुन्न ।
अब 'नयाँ नेपाल' को नारामात्र ले पक्कै पुग्दैन । 'नयाँ महान नेपाल'को नारासाथ पुनर्निर्माणको सुरुवात हुनुपर्छ । सामाजिक अभिमत नै नयाँ महान नेपालको पूर्वाधार हुने छ र बल हुने छ । एउटा व्यवस्था ढालिँदैमा हामीले सबै कुरा प्राप्त गरेका छैनौँ । एउटा अनुपयोगी थोत्रो घर ढालेका छौँ भने त्यसको जगको इंटाढुंगा बाँडचुडमा लाग्ने होइन अपितु नयाँ घरको निर्माणमा प्रवृत्त हुनुपर्छ । राष्ट्र निमार्णको जिम्मेवारी पक्कै ख्यालख्याल छैन त्यो यस अवस्थामा कि समस्त पूर्ववत स्थापनाहरुलाई पूरै अस्वीकार गरिएको छ । अनि युगौँयुगसम्म सदा प्रतिपक्षमा रही संघर्षरत रहँदा हामीमा निर्माणको लागि चाहिने सीप र अनुभव छैन । अब प्रतिपक्षीय बन्दूक, ढुंगा, मुढा र हडताल गरेर यो राष्ट्र संचालित हुनेवाला छैन । अझ यसको निर्माण नै नभएको अवस्थामा संचालनको कुरा कता हो कता परै छ । यसै अवस्थामा अनेकानेक स्वार्थहरुले दाउ मार्न खोजिरहेका हुन्छन् ।
विस्थापित शक्तिहरुले भड्काउने, वीष हाल्ने, प्रत्याक्रमण गर्ने, अनेकन हुन सक्छ । अझ सबैलाई बोलीहाल्दा अपच लाग्ने कुरा यो पनि हुन सक्छ कि अगाडि आएका यस्ता अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्दागर्दै सत्ता पनि दमनकारी हुन पुग्छ । सत्ताको अर्को नाम नै दमनसंयन्त्र हो । यसले जनमूखी धाराबाट विचलन हुनेवित्तिकै गलत जरा हाल्न लाग्छ र आफूसम्मत नहुने मूल्यहरुको मर्दन सुरु गर्छ । नियन्त्रण खाराब होइन तर यसले जनमूखीहद नाघ्न लागेपछि निरंकुश हुन लाग्दछ । यी सबै अवस्थाहरुमा जागरुक नागरिकहरुले खबरदारी गर्नपर्छ ।
कुरा हो साहित्यनीतिको । यसको कुरा अर्कै हुन्छ । यात समयसापेक्षताको नारामा त्यो सत्ताको भाटगीरी गर्छ र सत्ताको आँखामा नबिजाउने 'स्वीकृत जमात' बन्दछ या आफूसापेक्ष समयलाई डोर्याउछु भनेर समयको खबरदारी गर्छ र सत्ताको आँखामा बिझाउने 'अस्वीकृत जमात' बन्दछ । त्यॊ पहिलोखाले जमातको संघर्ष सिद्धिसकेको हुन्छ र त्यो स्तुतिगान गर्दै जीविकोपार्जनमै काल पर्खेर मर्दछ । तर अर्को खाले जमात हरेक क्रान्तिको सफलता पछि फेरि सकारात्मक परिष्कारको लागि प्रतिपक्षको भूमिकामा तत्काल प्रवृत्त हुन्छ । यो मरेर पनि संघर्षहरुमा जीवित रहिरहन्छ । 'अस्वीकृत जमात' भन्ने शव्द प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने शाश्वोत जमातको लागि एउटा नाम मात्र हो । नामसँग के छ ? एउटा विचार हो यो र अस्वीकृतिकै वरिपरी यो वैचारिक भएकोले यसको बिचारलाई 'अस्वीकृत विचार' भनियो अनि यो विचार बोक्ने जमातलाई 'अस्वीकृत जमात' । सामान्यमै बुझौँ - हामी जब बोल्छौँ हाम्रा मुखमा ताला लाग्न सुरु हुनेछ त्यसकारण हामी 'अस्वीकृत जमात' । हामी मुखमा ताला लगाउने संस्कृतिलाई नै उल्टै अस्वीकार गर्छौ त्यसकारणले पनि हामी 'अस्वीकृत जमात' । सबै सकारात्मक परिवर्तनको लागि सत्तासुख र सबैसबै प्रलोभनहरुलाई अस्वीकार गर्दै थप निमार्णको लागि अग्रगामी हुन्छौँ त्यसैले हामी 'अस्वीकृत जमात' ।